Abaningi bacabanga ukuthi ibhuku ku "AliEkspress" Resource abalandeli. Futhi lena ejwayelekile. Phela, ukuthi sisebenzelana nabantu isayithi sasivumela ethandwa. Yiqiniso, kuba njalo ezithakazelisayo ukuqaphela ukuthi umkhiqizo ukuthola inzuzo esitolo online. Noma kunjalo, ngisho amasayithi ethandwa kakhulu akuzona jikelele. Kwamanye ukuthenga kusadingeka ukuba uyekwe. Ngakho masizame ukuqonda ukuthi yini kungenziwa yayala ku "AliEkspress" ezithakazelisayo futhi ewusizo ekhaya nomndeni.
Nokho, ngaphambi kokuthi ukuqonda, bonke kulokho bonke abanakho ukubhekana nazo. "AliEkspress" - elidumile online store, okuyinto Positioning ngokwaso njengoba isiteji ezingeni international. He is into efana "Ibey" kuphela ngamanani aphansi futhi okunezinhlobonhlobo eziningi.
Nokho, ngezinye izikhathi ibizwa ngokuthi "u-Ali" Chinese ezidayiswayo. Phela, iningi izimpahla kule sayithi ngempela eChina. Kodwa lokhu akubavimbeli ukuba ekusebenzeni kahle. Uma abantu bebona lokhu, zifunda ukuthi incwadi ku "AliEkspress". Lokhu kwenziwa ukuze ke ukuthenga zabo. Esikhathini esitolo inthanethi nge isilinganiso okuxubile kumele uthenge ukudla hhayi olunikezwa zonke izigaba kwezimpahla. Lokho kungenziwa yayala "AliEkspress", ngakho-ke musa uzisole? Ake sizame ukuqonda le ndaba ebucayi.
Ake uqale nge yokuthi "Ali" - kuyinto esitolo jikelele virtual. On ke ungathola ngokuphelele noma yiziphi izimpahla nezingubo zokugqoka, kwafika. Phela, kuyinto isigaba zithandwa okuthengile.
Ngeshwa, akuyona yonke ancike kule webhusayithi lapho iyala izingubo. Ngakolunye uhlangothi, ukuthi ilungile. Uma umthombo enjalo udumo edidayo, iningi izimpahla ke kufanele aphathwe ngokuqapha. Kodwa ngakolunye uhlangothi, ngezinye izikhathi intengo izinga ezinhle izingubo yesimanje nje uya zasendle. Ngezikhathi ezinjalo kuwufanele look kuhle analogue ucishe ezishibhile. Futhi odlulela abantu phandle ukwenza oda "Ali".
Empeleni, uma kungukuthi usuwake wayisebenzisa i esitolo online ukuthenga izingubo, akukho lutho yingozi lapha. Into esemqoka - ukuze ukwazi ukugqoka yini ukugqoka. Khona-ke ngisho umkhiqizo eshibhe oyohlala isikhathi eside. Yikuphi kuyazuzisa oda "AliEkspress"? Ngokwesibonelo, izingubo kwabesifazane abakhulelwe kanye amasudi zabesilisa. Lokhu kungenzeka futhi ihlanganisa nomndeni zokubhukuda (basuke ngokuvamile asetshenziselwa ukuthathwa izithombe), kanye izingubo zezingane. Ngokuvamile, ungakwazi oda noma yini oyifunayo. Into esemqoka - ukuze uqhathanise izintengo uphinde ufunde izibuyekezo ngalokho uya ukuthenga.
Baby izinto ngokwabo iyabiza, ngezinye izikhathi ngisho kakhulu. Kodwa on the izingane nabazali bazo wanquma imali. Ngenxa yalesi sizathu, uma ucabanga ukuthi ukuze "AliEkspress", uyobe kusimangaze - ke kuyinto ithoyizi izingane. Mhlawumbe lena yiyona ndlela esisodwa sezigaba ezingabazekayo kakhulu azinake.
Phela, ngisho e-boutiques engcono emhlabeni elinegazi eziningi. Futhi "Ali", njengoba siqinisekiswa ngabasebenzisi eziningi, ezifana ezidayiswayo yavama. Uma ngikhuluma iqiniso, kule sayithi kungaba kuhle ngempela londoloza. Futhi kungalimazi impilo. Njengoba nezingane zakhe.
Umthetho main - zama ngokukhulu ukucophelela oda amathoyizi ukuze izinsana. Kungcono ukuba uwuthenge iyiphi Boutique kuka "Ali." Kodwa amathoyizi elithambile, abaklami, nokunye - okungukuthi konke kungenziwa yayala "AliEkspress". Kukhona izinto eziningi ezithakazelisayo. Ungathola ngisho ithoyizi Amazing noma into yokuqala. Ngoba wonke ukunambitheka nombala. Ukukhokhela ukunakekelwa okukhethekile ukuze imikhiqizo ezibekwe phezu wokwabelana yokuthengisa. Kodwa siyaphinda: ayibukeki imikhiqizo ukugembula ngoba uye kulencane kakhulu. ukuze Amathuba manga sisekhona, nakuba ayengafiki ngakho omkhulu. Kodwa kulokhu kangcono ukuthatha isinyathelo ukuze uphephe futhi engozini impilo yengane.
Yini incwadi enhle kwi "AliEkspress"? Ngokwesibonelo, uma amathoyizi izingane ngawe akuyona inkinga enjalo, bheka isihloko esithi "Imikhiqizo Ingane" sigaba. Kube ngokuqinisekile uzothola eziningi ezithakazelisayo futhi ngokuqinisekile ewusizo.
Kuyinto ikakhulukazi mayelana ifenisha zezingane, nezinye izengezo ngesimo ngendwayimane, "kangaroo", perenosok nokunye. Kufana 'Ali "yimuphi umzali kwetindlu letibita kancane indlela oda utho brand ngomntanakhe. Ukuphishekela konke lokhu kwenza ukuba sikhathazeke ngokuthi izinga akudingekile - ngezinye izikhathi ungcono ngisho nangaphezu kwanoma banganikeza izitolo evamile.
ukunakekela okukhethekile umbuzo yini oda "AliEkspress" imibhede usana kunikezelwe. Yilokho kanye okwenziwa ukhathazekile kakhulu iningi abazali. Khetha izinto "Ali 'omkhulu. Ungathola ukuthutha kwanoma iyiphi inkampani (kanye uhlaka kanye), kwanoma yiluphi uhlobo, kanye nemibala hhayi overpay eningi ezintweni zokunethezeka, njengoba abaningi. Ungesabi, ukulethwa kwezimpahla ezifana sivame ukwenzeka ngaphandle kwenkinga ngesimo umonakalo noma umshado.
Yini incwadi engcono ku "AliEkspress"? Mhlawumbe, cishe wonke umsebenzisi waphawula ukuthi ukunakekelwa okukhethekile kufanele kukhokhelwe omakhalekhukhwini kanye Smartphones. Lona izinto ethandwa kakhulu ukuba yayala esitolo online.
Kungani? Into wukuthi inani layo likwenza ubone phezu amafoni yasekuqaleni smart manje kwenyuke kwaze kwaba sekugcineni. Futhi "Ali" okungukuthi, njengoba mbumbulu for imali encane, futhi okwangempela. Futhi, futhi, ngeke ukhokhe kuhle ezishibhile.
Ngokuvamile ngaphambilini iPhone esigabeni smartphone. Ngokwesibonelo, ezitolo kubiza ruble 40 000, kanye "Ali" - 10 - 15 max. Umehluko iyabonakala ngokushesha. Yebo, i-iPhone ku-Chinese online store, kodwa ukusebenza nje kwafana original. Ezimweni eziningi, umehluko ayikwazi ukutholwa ngisho ezindaweni inkonzo. Ngakho, kungani ukhokhele electronics ezinjalo?
Empeleni, uma ucabanga ukuthi kungcono ukubhuka ku "AliEkspress" ifoni - kungcono ukukhetha okuhle. Lo mkhiqizo uyofika ngawe iphakethe (ibhokisi), ovikela amalungelo idivayisi ngesikhathi ezokuthutha ekulimaleni. Ngakho you phetho nedivayisi engabizi nge izinga ezinhle. Kukhona okuhlukile. Kodwa kwenzeka, avame ukuba ezingavamile, futhi isizathu ukuthi kukhona yekhwalithi ephansi inhlangano yabantwana bakwa-imishini, noma ukusebenza engafanele ifoni.
Technique - ngokuvamile okuthile okudinga ukunakwa umthengi intelligibility. Abaningi zijwayele uhamba ibanga elide eya ezitolo befuna "wona kanye" ikhompyutha noma ithebhulethi. Okunye ezisuselwe nezidingo zesistimu. Uma ningabakaKristu esigabeni sesibili yabathengi, ungakwazi ukusebenzisa "Ali".
Yini okufanele yayala "AliEkspress"? Lawa amakhompyutha kanye amaphilisi. Phela, lo muntu zokuphila kwanamuhla kubalulekile smart phone hhayi kuphela. Phela, inqubo lapha bayindlala kakhulu. Ikakhulukazi uma nje ungafuni overpay ikhompyutha, i-laptop noma i-tablet.
Inkinga eyinhloko - ukukhethwa imodeli. On "AliEkspress" limane nje omkhulu. Futhi ngokuvamile, ukuze ngingasebenzisi ukuze yizinkulumo emahoreni eziningi ebonakalayo ngokusebenzisa zonke izinhlobo zezimpahla, kufanele usebenzise isisefo samanzi ekhethekile. Kuyokusiza ukuba ngokushesha ukuthola imishini ohlangabezana nezidingo zakho.
Njengoba umkhuba ubonisa, ngokuvamile amakhasimende akhononde amaphilisi kulesi sigaba, ngoba ukulethwa yabo lihlotshaniswa ezinye uhlobo nkinga. Ngokwesibonelo, amapuleti ngezinye izikhathi uze emibi noma padded. Noma kunjalo, kusukela Ezimweni ezinjalo, sonke sibhekana. Kodwa-laptops nekhompyutha imishini - ke zako kungenye indaba. Lolu hlobo izimpahla iza ngokushesha futhi ngaphandle 'adventure. " Ngaphezu kwalokho, ukuthenga "Ali", uthola imikhiqizo bangempela ngamanani ukuncintisana. Yiqiniso, ngaso sonke isikhathi, kodwa ngokuvamile. Ukuze ugweme bekhohliswa, ufunde ngokucophelela incazelo, elisetendeni konke usinikeza yithuluzi internet.
Ngomqondo onabile, noma iyiphi iwebhusayithi Ungakhetha noma inhliziyo yakho ufisa. Futhi labo abazi ukuthi yini kuyazuzisa oda "AliEkspress" ngokuvamile ayeke ku izipho bona, izihlobo, ozakwabo kanye nengangibajwayele.
Yeka ezithakazelisayo bhuku ku "AliEkspress" kulesi sigaba? A ezihlukahlukene amawashi nezinye izinsimbi. Vele eduze uNcibijane lezi izimpahla zidayiswa ngokushesha futhi ngamanani yokuncintisana. Into esemqoka - ukuze ukwazi ukuthi iyini ufuna ukunikeza close, enye inketho zingase zephuze. Kanjalo-ke, ayikho inkinga lapha. Futhi izipho Ziyalwa ukuba "AliEkspress" ngokuvamile kakhulu.
Kungani izesekeli namawashi? Lokhu kuyisipho esiwusizo kakhulu futhi jikelele, okuyinto othulwe wonke umuntu. Empeleni, i-smartphone noma ithebhulethi kungabuye isibaluli kulesi sigaba. Kodwa ngaphansi izipho ezitolo inthanethi elivame ukuqondwa ngayo njengoba into luyingxenye ongokomfanekiso, kunokuba imishini noma izingubo namathoyizi.
Isipho okudume kakhulu "AliEkspress" - iwashi, ngakho kokubili kwabesifazane nabesilisa. Lapha, njengoba kuzo zonke izigaba umkhiqizo, kukhona okwangempela, futhi manga. Akekho ukukopela. Kodwa ngisho ne-mbumbulu "Ali" kuyinto izinga okusezingeni eliphezulu ukuze uwahlukanise kusukela iwashi real can kuphela pro omkhulu. Kodwa lezo zibalo ungathengi izimpahla emasayithini ezishibhile.
Girls kufanele nakanjani uvakashele isigaba "Health & Beauty" ukuze "AliEkspress". Phela, le ndawo yiyona nesigamu enhle lwesintu isithakazelo esikhulu. Lapha ungathola i izimonyo engabizi, kodwa eliphezulu, konke manicure, pedicure, futhi ezinye izindlela zokwelapha zokuzithokozisa kanye ekuvuseleleni. Oyipharadesi kwabesifazane.
Ngokuvamile, yebo, eyathengwa izimonyo. Ibe isilandelwa - kits professional (manicure, pedicure, nail nokunye). Ngemva - Izimonyo. Futhi okungeziwe ezingadumile kakhulu ezifana amafutha abalulekile noma eyelashes. Konke lokhu ungakwenza ukubhuka ngamanani ezinhle "AliEkspress". Futhi uma ubungase abakushayi, uma awukwazi ukuthenga ngokwakho izinga kangaka nekghono, okuyinto kwanele ukugcina eyakho.
Kazi kungayiletha inzuzo futhi bayalwa ukuba 'AliEkspress "yaseNdlunkulu ikhishi ngaphandle overpayments. Kodwa abantu abaningi abangethembi yezitolo online. Phela, ngaphambi kokuthenga, isibonelo, ipuleti noma blender, ngifuna ukubona ukuthi yini ukuthenga futhi awutholi ingulube in a xhoxha. Ngakho ukuthi imishini emikhulu "Ali" akusho ukujabulela ukwanda okukhulu, futhi lokho okuhle - kalula.
Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ngokuphathelene ekhishini izitsha. Kulesi sigaba ungathola into ngokuvamile hhayi ezitolo njalo. Ngokwesibonelo, umuzi Fryer (e okufanayo "Maximus", isibonelo, iphupho oyinhloko wayeka ngevolumu 2 amalitha kawoyela), i-popcorn ukupheka zikagesi, waffle ezinsimbini ngisho imishini ye cotton candy. Yiqiniso, intengo zonke lezi Ikhishi injabulo ongaphakeme. Kodwa ukuqina hhayi yabo nakakhulu, kuka ezitolo okudayisa. Omama bamakhaya njalo okuthile ukuthenga kwi "AliEkspress" lasekhaya. Futhi isinqumo esifanele.
Ngakho, manje sekuyisikhathi fingqa obekushiwo. Ukuthi ukuze "AliEkspress"? It amathoyizi, usule izinto zikagesi eziphezu, izingcingo, ama-computer, izipho, izingubo kanye izimonyo. Ngomqondo onabile, mhlawumbe, ungakwazi oda konke ofuna umphefumulo. azikho imingcele.
Okubaluleke kakhulu, aqaphelisise ukuthi yini oda. Kungenjalo, ungase ube nomuzwa wokuthi indoda bekhohliswa. Ngokwesibonelo, uma esikhundleni ithebhulethi yokuqala you`ll inkohliso, futhi yayala into nokuphathelene kanye niyithole ke. Tadisha umkhiqizo ngaphambi kokuthenga, futhi ngaleso sikhathi kuyoba awanandaba!
Online esitolo ezobuchwepheshe "Kotofoto": ukubuyekezwa, amakheli, Amahora okuvula
Inthanethi wezitolo "Rumiko": Izibuyekezo
I "Elevrus": ukubuyekezwa. Isehlukaniso noma iqiniso?
Indlela Yokuthola iplamu ikhekhe: elula okumnandi
Georgian uju churchkhela - kuyini?
Izenzo laseJalimane Krasnodar esiyingini isibhakela: Robert Stieglitz
Isaladi Kirieshki nobhontshisi. Bean isaladi zokupheka.
Ukukhokhelwa kwamaholide. Amavikikiki namaholide. Ukukhokhwa kwezimpelasonto namaholide
Propolis tincture: ukupheka
Umakhi waseRussia A. Zakharov: biography futhi usebenza